Ndị ọkachamara na Semalt kọwara otú iji wepu Ilovevitality na Darodar Site nchịkọta Google
Ọ bụrụ na ị mepee ebe nrụọrụ weebụ ohuru na nso nso a ma hụ ihe dị iche na akaụntụ Google Analytics gị, enwere ike ịnweta okporo ụzọ. Julia Vashneva, Semalt Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ahịa, na-ekwu na spambots ga-ejupụta ọnụ ọgụgụ gị ma gbuo site na bandwidth na ụbọchị ole na ole. Ị ga-ahụ na nza nke okporo ụzọ ga-eme site darodar.com, ilovevitality.com, na ndị ọzọ ghost referrals. Naanị ajụjụ nke ga-emetụta uche gị bụ ihe mere ọ na-eme na otu esi ewepu usoro mmemme nke mmụọ?
Okwu Mmalite nke Darodar na Ilovevitality.com
Darodar na ilovevitality.com na-ezo aka dị ka ndị na-agwa ndị mmụọ. Ọrụ abụọ ndị a ejupụtawo na ịntanetị n'echiche ndị na-ezighị ezi, ebe ha na-ekwu na ha na-eziga ezigbo nleta site na ahia na mkpọsa SEO. Ilovevitality.com na Darodar bụ ndị robots ga-eti weebụ ahụ iji weghaa data Google Analytics gị. O di nwute, ha na-enye ihe ndaputa, na onu ogugu buru ibu karia ka aturu anya. Ha skew metrics nke saịtị gị ma kọwapụta data Google Analytics. Ilovevitality.com na Darodar bụ akpaka na random, na-akpata ọtụtụ nsogbu gị. Ọbụna mgbe ị na-edebanyeghị aha maka ọrụ na onyinye ha, ha ga-abanye n'ime ebe nrụọrụ weebụ gị.
Okwu Mmalite nke Ozi Ntuziaka
Ọ bụ ihe ọjọọ na mgbasa ozi ọ bụla dị mma n'ihi na okporo ụzọ dị mma dị oke ọnụ ahịa karịa mgbasa ozi dị ala na nke na-adịghị mkpa. N'ezie, ọtụtụ webmasters na-ebibi saịtị ha n'ihi ụzụ ọjọọ..Ndị a na-ahụkarị spambots, ọ dịghịkwa mfe igbochi ha. N'ụzọ dị nro, e nwere ụfọdụ ntụziaka, ihe ngosi, na usoro iji kpuchie ebe nrụọrụ weebụ gị site na ụgbọ okporo ígwè na bọtịnụ. Bots nọgidere na-eziga okporo ụzọ ọjọọ na data na saịtị gị ma skew Google Analytics.
Wepụ Darodar na usoro .htaccess
Ọ bụrụ na ị maghị ihe ọ bụla gbasara faịlụ .htaccess ma ọ bụ FTP, ka m gwa gị na ọ bụ otu ụzọ kachasị mma iji wepụ Darodar. Ị nwere ike ikpochapụ ndị na-ekwu okwu nke mmụọ na usoro a, ọ ga-ewe naanị nkeji ole na ole. Ịkwesịrị ịnweta faịlụ FTP na faịlụ .htaccess. N'ọnọdụ, ị maghị ihe ọ bụla banyere ọrụ abụọ a, anyị na-eme ka ị ghara ịdaba na usoro a ma chọọ ka ị gaa n'ihu n'ihi na anyị achọghị ka ị nwee nsogbu ọ bụla n'ọdịnihu. Ị kwesịrị ị na-eso ndị a dị mfe nzọụkwụ iji kwụsị Darodar, ilovevitality.com, na ndị ọzọ na ghost referrals si ebibi gị na saịtị. Mepee faịlụ .htaccess ma tinye koodu kapịrị ọnụ na ya. Usoro a ga - enyere gị aka igbochi Darodar botnets na obere oge.
Wepụ Darodar si nchịkọta Google
Ọ bụrụ na ị nweghị ahụ iru ala na-eji ụzọ ndị dị n'elu, anyị na-atụ aro ka ị wepụ Darodar site na akaụntụ Google Analytics gị. Ihe ndekọ a nwere usoro nhazi nke nchịkwa, nke ga-enyere gị aka zoo ihe nnọchianya na-ezighị ezi site na ID gị. I kwesiri iburu n'obi na ndi nzachapughi iwepu uzo a na-amaghi ya. Kama nke ahụ, ha nwere ike zoo ya site n'echiche ahụ. Gaa na ngalaba Admin nke akaụntụ gị ma mepụta Nhazi ọhụrụ. Ikwesighi ichefu wepu Darodar ma chekwaa ntọala.
Kpachara anya: Anyị na-akwado gị ka ị ghara iji ụzọ ọ bụla na-enweghị nkwenye kwesịrị ekwesị. Ngwá Ọrụ Ntugharị Darodar nwere ike ịmepụta nsogbu maka gị, yabụ na ị ga-ahọrọ usoro kwesịrị ekwesị mgbe ị na-ele ọkachamara kọmputa.